Daalibaan ayaa raadinaya muuqaal ka gedisan kii hore iyada oo wadahadaladii nabadda Afqaanistaan ​​ay sii socdeen – Walaal24 Newss
Daalibaan ayaa raadinaya muuqaal ka gedisan kii hore iyada oo wadahadaladii nabadda Afqaanistaan ​​ay sii socdeen
December 28, 2018	0	By walaal24
Taalibaan ​​ayaa isku dayaysa inay muujiso inay isbeddeleen tan iyo maalmahii xunxumaa ee 1990-yadii markii ay mamnuucayeen Waxbarashada, Muusikada iyo Gabdhaha, ayna qaateen dilalkii dadweynaha ee ka dhacay garoon kubada cagta ee Kabul.
Afhayeenka Taliban Zabiullah Mujahid ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamadani ay ku soo laabteen magaalada Kabul, ka hor intaanay culeyska ka qaadin Mareykanka. ciidamadii soo galay Afganistaan 2001-dii.
“Waxaan dooneynaa inaan xaqiijino muwaadiniinta Afqaanistaan ​​in aysan jiri doonin wax khatar ah oo aan cidna ka imanaynin.”
Fikradaha ayaa imaanaya xilli ay socdaan wadahadaladii nabadda ee sii kordhayay, kadib shirar dhawr ah oo dhexmaray wakiilka gaarka ah ee Maraykanka Zalmay Khalilzad iyo wakiillada Taliban muddadii saddexdii bilood ee la soo dhaafay.
Fikradaha kala duwan ee isbedelka ayaa sheegay in in ka badan 5,000 oo ciidamo Maraykan ah laga yaabo in laga saaro Afqanistaan, iyada oo ay ugu wacan tahay in ay ka soo horjeedaan istaraatiijiyaddii hore ee Maraykanku ay ku xakameyn lahayd cadaadiska milatari ee ka soo horjeeda kacdoonka.
“Mucaaradkeenu waxa ay la joogaan ciidamo shisheeye oo Afgaanistaan ​​ah, marka ay baxayaan oo heshiis nabadeed la gaaro, waxaa lagu dhawaaqi doonaa cafis guud oo caalami ah,” ayuu yiri Mujahid.
“Midna, bilayska, ciidanka, shaqaalaha dawladda ama qof kasta, ayaa wajihi doona dhaqanka aargoosiga ah ee naga soo horjeeda.”
Warbixinnada ka soo baxday lama caddeeyn, laakiin waxay ka digayaan duulimaadyo badan oo Afqaanistaan ​​ah oo xasuustay xasillooni darro ah xukunka Taliban ee adag.
“Uma maleynayo inay maskaxdooda isbedeleen, laakiin waxay fahmeen in aan la ixtiraameyn xuquuqda aadanaha, oo aan laga aqbalin beesha caalamka,” ayuu yiri Bilal Sediqi, oo ah afhayeenka Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Independent Human Rights Commission.
Afgaanistaan ​​waxay u badan tahay in ay ku tiirsan tahay gargaarka dibedda muddo sannado ah, Taliban waxay ogtahay in aanay dib ugu laaban karin markii ay dagaalyahaniintu ku dileen magaalada Kabul ka dib dagaalkii sokeeye ee 1990-meeyadii.
Laakiin waxay ku adkaysanayaan in sidoo kale dib u soo noqoshada ciidamada ajnabiga ah, waxaa jiri doona dib u laabashada xukunkooda adag ee xukunka Islaamka, qaar badan oo ka mid ah Afgaanistaan ​​ayaa shaki galinaya sheegashadooda inay jilicsan yihiin, xitaa marka ay rajo ka qabaan dagaalka.
Bishii Juun, hoggaamiyeyaasha Taliban ayaa ka xanaaqay dagaalyahannadooda iyagoo isku dhejinaya is-qarxinta askarta iyo saraakiisha dawladda iyo cunista jalaatada dadka rayidka ah intii lagu jiray saddex maalmood oo xabbad-joojin ah. Wax yar ka dib, waxay bilaabeen weerarro adag oo lagu qaaday gobollada istiraatiijiga ah si ay isugu dayaan inay afduubaan ciidamada Afqaanistaan ​​waxayna dadka rayidka ah u adeegsadeen gaashaan.
“Waan ogahay inaysan jirin meel ii ah haddii ay Taalibaan ku soo noqdaan qaabkoodii hore,” ayuu yiri Abdul, oo ah 12-sano oo askari oo bilays ah oo hadda ka shaqeeya gobolka galbeedka Faarax.
“Waxaan u taaganahay dhinaca xukuumadda wax kasta oo ay go’aamiso, laakiin wali ma aanan lumin rajada mustaqbalka, Taalibaanku ma ahan kuwii hore, waxaan aragnaa isbedello iyaga ka dhexeeya, sidoo kale way ka daalan yihiin dagaalka.”
Daalibaan, oo ah qowmiyadaha qowmiyadeed ee Pashtun, ee ugu xooggan koonfurta iyo bariga waddanka, ayaa hadda kantaroolaya ballaadh ballaaran oo baadiyaha, halkaas oo ay canshuur ka qaadaan, maxkamadaha uxiraan oo ay xakameyaan waxbarashada.
Dad badan oo reer Afqaanistaan ​​ah oo reer miyiga ah, ayaa Talibaanku xukunka ku soo dhaweeynayaa iyo ganaaxyada naxariis la’aanta ah iyo kantaroolka adag ee xuquuqda haweenka ku habboon oo leh hab dhaqameedyada meelo badan.
Degmadda Aqtash ee waqooyiga Kunduz, oo ah xagjir argagixiso ah oo ka tirsan ciidamada Taliban, ayaa qaar ka mid ah haweenka ay sheegeen in loo oggol yahay inay si xor ah u socdaan ayna u baahna inay wajahaan wajiyadooda oo dhan.
Mujahid ayaa sheegay in Taalibaanku aysan ka soo horjeedin waxbarashada ama shaqada haweenka laakiin waxay doonaysay in ay ilaaliso xeerarka dhaqanka iyo diinta.
“Ma ka soo horjeedo haweenka ka shaqeeya ururrada dawlada ama howlahooda bannaanka, laakiin waxaan ka hor imaan doonnaa dharka dhaqanka ajnabiga ah ee haweenka soo gala, oo loo keenay waddankeena,” ayuu yiri Mujahid.
Omaid Maisam, oo ah afhayeenka Afhayeenka Afgaaniga Afgaanistaan ​​Abdullah Abdullah, ayaa sheegay in dawladdu ay ilaalinayso xuquuqul insaanka, Taliban waa in ay aqbalaan dastuurka qaranka si ay u daadiyaan sawirka adag.
“Waxaan aragnay qaar ka mid ah calaamadaha isbedelada iyaga ka dhexeeya, laakiin waa inay muujiyaan tallaabooyinkooda in ay dhab ahaantii isbeddeleen,” ayuu yiri.
Dad badan ayaa aaminsan in dib u soo noqoshada Taalibaan ay ku hanjabayaan guulaha uu waddanku sameeyey tan iyo 2001-dii. Shaqooyin badan ayaa weli ah in la sameeyo si loogu qanciyo haweenka shaqada ama waxbarashada iyo kooxaha shakiga ah ee ka soo jeeda qowmiyadaha, yurubyada iyo Hazaras ee waqooyiga iyo bartamaha Afqaanistaan.
“Waxaan u maleynayaa in qaddiyaddan oo ah in Taalibistaan ​​isbeddeleen ay tahay marmarsiiyo loo isticmaalo Taalibaan si ay u aqbalaan,” ayuu yiri Malina Hamidi, oo ah macalin dugsi ku yaal degmada Chamtal ee gobolka Balkh.
“Waxaan boqolkiiba boqol kalsooni ku qabaa in markii ay ku soo noqdaan awooda, waxay noqon doonaan isla Taliban oo xukuma Afgaanistaan ​​sagaalaad.”
Wasiirka Xukuumada Federaalka oo la kulmay Safiirka Mareynkanka u fadhiya Soomaaliya
War saxaafadeed ka soo baxay Golaha Wasiirada Puntland Shirkii aan Caadiga ahayn yeeshay
Akhriso Wareegtada: Gobolka Shabeelaha Hoose oo loo magacaabay Gudoomiye cusub
Madaxweyne Farmaajo oo munaasabadda Ciidda awgeed ka farxiyey Naafada Ciidanka Xoogga Dalka ee Cusbitaal Martiini
Guddoomiyaha golaha Shacabka oo magaalada Garoowe kula kulmay Madaxweynaha Puntland
Dhageyso: Guddoomiyaha Aqalka sare oo ka hadlay warqad loo diray D.Goboleedyada kana soo baxday xafiiska Madaxweynaha
Dhageyso: Gudoomiye Inj. Yariisow oo xaladiisa Caafimaad oo soo hagaageyso
Dhageyso: Gudiga Aqalka sare oo la Kulmay Wasiir ku-xigeenka Arrimaha Dibadda Finland
Daawo: Gohalaha Wasiirada Puntland oo kulankooda ka hadlay dhulka daaqa, Amniga iyo Socdaalka
Daawo: Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan Ciidamada Darawiishta
Daawo: Madaxweyne Muuse Biixi oo daah-furay Imtixaanka Shahaadiga ah ee Dugsiyada Dhexe iyo sare ee Dalka
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo saladii Jimcaha ka dib ka hadalay xaalada dagaal ee Dalka ku jiro